के छ सबैको चासोको विषय बनेको बहुचर्चित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा ?(विधेयक सहित) - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
के छ सबैको चासोको विषय बनेको बहुचर्चित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा ?(विधेयक सहित)
काठमाडौं । बहुचर्चित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ लामो कसरतपछि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छ । अब राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि कानूनको रुपधारण गर्नेछ ।
यही माघ ११ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको यो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि ऐन बन्ने प्रायः निश्चित भएको छ । तर प्रा. डा. गोविन्द केसीको मागअनुसार यो विधेयक संसद्मा प्रवेश गरे पनि केसीको अनशन भने अझै समाप्त भएको छैन ।
सरकारी शिक्षण संस्थामा सञ्चालन हुने चिकित्सा क्षेत्रको स्नातकोत्तर तह नेपाली विद्यार्थीका लागि निःशुल्क हुने व्यवस्था छ । छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने व्यक्तिले एक वर्ष सुगम र एक वर्ष दुर्गममा गरी दुई वर्ष सेवा गर्नुपर्ने प्राबधान छ । त्यस्तै विपन्नहरूको चिकित्सा शिक्षामा पहुँच बढाउन सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । हरेक प्रदेशमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गरिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । विधेयकमा विशेषज्ञ जनशक्तिको वैकल्पिक उत्पादनका लागि नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजको व्यवस्था गरिएको छ ।
काठमाडौं । संक्रमित व्यक्तिलाई टोकेको लामखुट्टेले अन्य व्यक्तिलाई टोकेमा कोरोना नसर्ने विज्ञले बताएका […]
यसरी गर्नुहोस् घरमै बसेर लोक सेवाको तयारी:कोठामै ह्वाइट बोर्ड,युट्युबमा कक्षा
काठमाडौं । तुलसीराम ढकाल कामको सिलसिलामा पाल्पा पुगेका थिए । चिया पसलमा गफको क्रममा थाहा पाए, महिलामा लोक […]
बोआओ अध्यक्षमा बान की मुन विजयी
एजेन्सी । बोआओ फोरम फर एशियाको अध्यक्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व महासचिव बान की मुन निर्वाचित भएका छन् । […]